TSY HIALA ETO AMIN’NY MAGRO ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA – MyDago.com aime Madagascar
N’inon’inona hitranga hoy Andriamatoa Rodolphe izay nisolontena ny fikambanana very asa teny amin’ny Magro Behoririka androany dia tsy hiala eto isika vahoaka raha tsy tonga ny ara-dalàna, miverina eto i Dada. Tsy mitsahatra ny tenany hoy izy miteny eto nefa tsy misy mihaino kanefa misy fetrany ny zavatra rehetra. Betsaka ny zavatra nanjo antsika teto , be ny very asa, , noho izany dia aoka isika ho tonga saina araka ilay filamatr’i dada hoe aza matahotra. Andriamatoa Zouzou dia nanambara fa nisy ny tondrozotra teto, iza anefa hoy ny fanontaniana napetrany no tsy nanatanteraka izany ? Iarahantsika mahalala hoy izy fa Rajoelina no manakorontana. Nisy ny andininy faha 96 ao amin’ny satan’i Cotonou kanefa ny sazy ampiharin’ny iraisampirenena dia manalasala. Ny solontenan’ny tantsaha Rafredy dia nilaza fa raha naheno ny tenin’ny vondrona eoropeana , ny teboka fito napetraky ny GIC-M ny tenako dia manontany hoe ovahana ve ny krizy ? raha tena hamaha izany dia henoy ny feon’ny vahoaka. Zavatra valo hoy izy no takianay vahoaka dia ao anatin’ny tondrozotra. Miverina eto dada, mivoaka daholo ny gadra politika, sokafana ny radio nakatona. Mba hisian’ny fitoniana dia avela daholo izay rehetra hilatsaka fa efa neken’ny CES. Averina ny fiandrianampirenena mba ho tany tan-dalàna ny eto. Averina ny fahaleovantena. Ny miaramila hoy izy no fahavalo satria miandany amin’ny ankilany. Ny olana teto dia ny movansy roa ka na vitsy an’isa aza ny ekipan-dRajoelina dia miandany aminy ny miaramila. Teneno aloha ny miaramila hody any amin’ny lakazerina dia milamina ny tany. Ny nahatonga ny GIC-M hoy izy dia raha nivoaka ny lisitry nykandidà ka rehefa laharana faharoa i Neny dia tsy sahy izy ireo. Dikany dia GIC-Matahotra. Nenifara izay nisolontena ny faritra andrefan’Iarivo dia nanambara fa tsy mila fohazina intsony ilay fitiavantanindrazana ao am-pon’ny Malagasy. Ny frantsay hoy izy no voalohany mikatsaka ny hamerin-jo antsika. Ny fahaleovantena voalohany hoy izy dia ny fahazoana mifidy malalaka. Na firy na firy mpilatsaka dia vonona izahay hifidy ary tsy azo hozongozonin’ny hafa izany. Tsy hanaiky hatramin’ny farany izahay ho ngejainareo. Fantatray tsara fa tianareo tsyhivaha ny krizy. Midika izany fa ianareo no fototry ny krizy. Noho izany raha misy ny CES dia olona mandinika sy mieritreritra tsara ny movansy Ravalomanana, fantany fa tsy mendrika ny zavatra nodinihana teo. Samia isika hoy izy vonona.
RALAINIRINA MARCEL : TSY MANAIKY IZAHAY RAHA TSY MODY I DADA
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 août 2013 Catégories Politique
20 réflexions sur « TSY HIALA ETO AMIN’NY MAGRO ISIKA RAHA TSY TONGA I DADA »
10 août 2013 à 19 h 12 min
Ra ny fijanona eo @ ny magro aloa dia tsy ho tonga mihintsy i Ravalomanana na ho folo taona aza.
Tsy misy afa tsy famohahana ireo gadra miaramila rehetra sy ny fidinana an-dalambe ihany ary miray hina na iza na iza mahavita izany rehefa mirodana io fitondrana jolamboto io dia mifampiresaka ny mpanao politika rehetra fa izay handrodanana io janjakana jiolamboto io no tsy maintsy va olana voalohany tonga ho azy ny filaminana vaomidaboka ireo!
10 août 2013 à 21 h 27 min
MIAKABARY FOANA EO FA IZAY TIAN NY FRANTSAY IHANY NO TANTERAHAN I RAJOELINA .
KA MANDANY ANDRO AO @ MAGRO IHANY.
10 août 2013 à 23 h 08 min
L’Ordonnance adoptée hier en Conseil des Ministres permet aux candidats qui se retirent volontairement de présenter des candidats de remplacement.
Iza avy ireo ministra nanaiky io toe javatra io :
Ihanta ,Botozaza ,Ruffine ,….ireo minsitry ny mouvance ravalomanana rehetra .
10 août 2013 à 23 h 18 min
Aoka tsy hamaky na hanao dika vilana ny votoatin’io hitsivolana.
Izao ny zava-dehibe voalazany :
-mahazo miala izay te-hiala ary haverina amin’ny vola narotsany (50 millions)
Izany hoe tsy misy fanalana mpifanina afatsy ny sitrapony..izy samy irery
Eny ireo ministry n muvance RAVALOMANANA MARC dia anisan’ireo minisitra nifidy izany..
koa inona no olana ?
11 août 2013 à 4 h 53 min
Marina ary mifameno ny voalazanareo eo ireo,
ary isaorako manokana eto i michel fa ny fehezanteny lazainao farany dia mendrika asiana QUOIIIIII what the hell they are trying to imagine?
Dia ahoana tokoa rey olona no tena mouvement entitra ataon’i Tsiranana Ruffine, fa nisy réserve mankony nataon’ny mambra tao @ ankolafy dada8 tany aloha
I Magro anie rey olon ka ambohi-pihaonan’ny TIA TANINDRAZANA izay tena sisa nanamborana tsy voasambotra eto Gasikara ê: vao tsy ela akory nitafa t@ namana aho, fa i Neny nitsidika tao aza hono ilay indray mandeha iry toa efa nisy tireur d’élite en poste tany ho any?!
Efa mponina ny ao, manana ny ambiance azy manokana, mifampitsinjo, izay tsy ampy oxygène mitondra mitondra rivo-FAHAFAHANA dia mandalo ao na dia hiserana kely fotsiny ao aza!!
Ambohipiaonana tokoa i Magro ary ahitana ny sokajin’olona rehetra:antitra,tanora,vehivavy,lehilahy,tsy an’asa,mpandraharaha,mpianatra,renim-pianakaviana etc…Ireo no olon’i Marc Ravalomanana indrindra satria mafana andro,mangatsiaka andro,avy orana dia eo ireo.Mankasitraka tompoko isany.Ny ilaina sisa dia mpitarika manana planina ABC hitaritana ny olona hikomy tanteraka.
11 août 2013 à 12 h 46 min
Tokony tsy atao anton-dresaka ny kianajan’ny Magro Behoririka..Proprité privée izy io ary ny tompny -ny Filoha RAVALOMANANA MARC – dia niteny fa tsy miala eo ny Ankolafy raha tsy izy no miteny hoe :miala amin’izay
Aza atao diska loaka aza ilay resaka hoe. tsy miala eto isika raha tsy tonga i Dada , fa inona no ataontsika hahatongavany ary inona ny vahaolana ho raisina, inona ny ady hatao, hiadivana ireo manakna azy tsy hody .
Sa minadry ny fandresen´i neny isika. Hazavao fa tsy mazava .
11 août 2013 à 14 h 42 min
Izao ireto fikambanana ireto dia tsara hanaovana tatitra momba ny mahazo an’i Lalao Ravalomanana:
– FIDH Genève (Suisse)
– High Council of international law and Human rights
– International Women’s suffrage alliance.
– Nobel Women’s Initiative.
Mila fikambanana mazava no manoratra fa raha olona iray dia tsy manankery.Efa hitanay mantsy izany olana izany.
11 août 2013 à 14 h 49 min
Raha tsy misy olona intsony eo amin’ny Magro Behoririka dia izay no vita fa tsy tian’ny olona intsony izany ny Filoha Ravalomanana Marc ka toa miteniteny foana izao miteny hoe : na folo taona aza ry Alfred – Ho hitanao tsara fa misy vokany be dia be mihitsy ny fijoroana eny na 100 taona aza ; ny fijoroa,’ireo olona eny indrindra no hatahoran’ny hafa tompoko !
11 août 2013 à 16 h 19 min
Ny olana (misaotra Michel) dia ny frantsay iany. Io no fahavalon’ny malagasy tia tanindrazana fa tsy DJ sy ny tariny, mpiasa, voakaràma.Mamy ny vola kà !!
11 août 2013 à 22 h 37 min
Fa inona no mahazo an’i Neny ry dà???taitra be za!!!
ianao mantsy milaza io ambony io hoe: »……momba ny mahazo an’i Lalao Ravalomanana »
Fa maninona izy???raha mba misy afaka mamaly ahy koa azafady fa miasa loha be za, misaotra tompoko!
Ranavalona! ahiana ho ailika ny sasany izy ka tokony izao dia efa mitady paik’ady hisorohana an’izany.
Hay taitra aho ry dà!!raha izay olona tsy ahoako fa ny fantatro dia
» Andriamanitra tsy manary ny olony » koa aoka isika ahatoky raha tena mino marina.
Ny nidiran’i Neny tao ihany no mafy fa antsika izao ny ady, isika koa miaraka @ Tompony,
ny sisa kosa dia ady tsy maintsy hatrehana.
Tsy misy iza na inona aantenaina intsony koa eo afa tsy herin’Andrimanitra ary efa miharihary izany.
Efa ataon’ny satana tsisy mahaetsika dia MIDONGIZINA daholo.
« Ny mino tsy maintsy mandresy ».
Mianona eo ary , miandrasà lavitra akory , fa hoavy i dada.
Hiarahantsika mahalala fa ireo izay tonga ao Magro,ny vahoaka no tianay tenenina,dia tokana ihany ny tanjony dia ny hiverenan’ny ara-dalàna satria mahatsapa ny voka-dratsin’iny fanonganam-pajakana iny.Tsy ho velabelarina eto intsony izany.
Ny asiana fanamarihana fotsiny dia izao:mora ny miteny sy midradradradra hoe:tsy hiala eto izahay raha tsy tafaverina eto i Dada,fa ahoana no HANATANTERAHINA izany?Eo no mipetraka ny fanontaniana.Mila paik’ady hentitra izany.
Ity koa anankiray : »ny antsika i Neny ihany » Dia ahoana raha tsy ampidirin’ity CES vaovao ity ao anaty listrin’ny ho fidina izy?Miala système hoy ny sasany,boycott hoy nyy sasany.
Izahay aloha tsy ho lany andro hanakiana izay heverina fa tsy nety hatreto.RANO LATSAKA TSY AZO RAOFINA ireny ,ary RAVINKAZO NIHITSANA ka aleo ny sisa no hampaniriana.
Miala système ? dia ahoana ? tsy efa tara loatra ?
Boycott ? raha ny 65% heverina ho mpomba an’ Neny no taritina tsy hifidy,na 80% aza io,na 90% izay mifidy sisa eo dia ataon(dry zareo mana-kery foana,dia ny candidat n’i reny malala no hapetrany eo.
Raha mivondrona anefa ny opposition REHETRA,Zafy, Ratsiraka,Ra8,sy ny sisa rahetra KA MIVONDRONA HAZAHOANA NY HAINO AMAN-JERY,NY RADIOm-pirenena,NY MEDIAS isankarazany manao fandresehan-dahatraho ren’ny vahoaka manerana an’i Madagasikara,FA TSY METY IO FIFIDIANANA IO ! dia efa TOLONA BE ts’isy ohatr’izany io.
Antenaina !tsy ratsy ilay hevitrao , mankasitraka !indrindra eto @’ilay farany .
Koa aoka kosa tsy ody idiana fanina fa nisy ny antony matoa tonga izao, tsy nisy tsy diso fa kosa
ilay ezaka fanarenana anie no tsy musy ary toa vao maika mitarazoka ilay fahavoazana e!! raha mba misy
ezaka kely eo tsy adala ny olona, mbola anaty ady izao koa tsara ihany ny mampatsiahy mba tsy hivalaparan’
ilay zavatra tsy nahaomby teo aloha, AMIKO ALOHA An!!
Ilay tetika enti-miady AMIN’IZAO FOTOANA IZAO mihitsy anie ranavalona no mamaki-loha e!noho ireo zava-misy miovaova foana! Maro dia maro ny hevitra mipoitra an-kavia an-kavanana,lasa mampisaraka ny olona mpiara-mitolona mihitsy aza moa indraindray,fa mba navoakanay io hevitra io na dia fantatra aza fa sarotra tanterahana,ny « liberté d’expression » tsy misy.Vazivazy zari-tena ihany ity: nahoana moa raha hanaovana rodobe
tampotampoka,tsy ankiteniteny ,ny fidirana any @ radio,télé -mpajankana ireny,an’ny malagasy ireny kou!Ny firenena hafa no mahavita izany hoy ianao ?anefa toa vitantsika izany t@ fametrahana olona isaky ny ministera t@ 2002 ?Eny e ,tsy mora alohae!
14 août 2013 à 16 h 36 min
Amiko dia io hevitrao farany io IHANY no lalana tokana ary tena mahaomby indrindra,
tsy musy lalana hafa ankoatra io fa saingy tsy haiko izay fomba handraisan’ireo tompon’
andraikitra fa raha io no tafa, MINO aho fa tafavoaka isika, ny sisa ankoatra io dia blabla resaka matavy.
ouzala dit :
19 août 2013 à 11 h 34 min
Izao loun tam 2002 dia anisan’ny nanohana tanteraka an’R8 e!! fa refa nandé ny fotona taty aoriana dia itako fa mitovy am ratsiraka iany! Mody masina, mody mpivavaka nefa tena pffff….Tonga indray rajoelina nirotsaka maire ! Mba nifidy anazy iany koo za kanjo refa tonga ny 2009 , otran ravalo iany, fa vô mé pire ny zvt niseho…
Amiko dia mendrika mihintsy ny nanalana an ireo candidat reo ! Fa na zany aza, ny tena pbm eto d isika malagasy mitsy no tena efa SIMBA, handevozin ny devoly….
Ka io, na Dada, na Neny, na Dadabe (ratsiraka), na zandry kely, na iza na iza, refa vahoaka mbola tsy miverina amin’Andriamanitra dia aza manantena zvt eo mits!
Hoan ireo olona very asa tao am Magro ! Zay lé fiainana fa mahereza ianareo ary aza mandany fotona makao fa lanio amin’ny fitadiavana asa vaovao ny fotoanareo….
Ny mpanao politika dia mitovy fona ! Mamahana lalitra fona ary tsy iova mits…
Précédent Article précédent : FITONDRANA AMERIKANA NIARO NY VAHOAKANY, FITONDRAN-DRAJOELINA NAMONO NY MPIANANY !
Suivant Article suivant : Lalao Ravalomanana tany amin’ny Toby Kristy Manafaka Ibora : Mila firaisankina isika sy afaka miara miasa ary mivavaka